Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 04/02/2020)
Mid ka mid ah wax aan aad xaqiiqsato laga yaabaa in, waa in biir wanaagsan Route by tareenka waxaa laga heli karaa in badan tareenada. Sheffield Tubada The waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan, soo bandhigtay oo ku saabsan 30 casks iyo Istimaalka - qaar ka mid ah kuwaas oo muujinaya doorashada ka Breweries maxalliga ah iyo xoogaa dahsoon. Waxaad ka heli karin tareenka oo la tag booqo qaar ka mid ah ... ama joogo iyo waqti badan ku qaataan iyaga sampling. Sidee qabow?!
Magaca bar wuxuu ka yimid biir ah tremens, whose pink elephant symbol also decorates the cafe entrance.
tareenka waa 10 socod daqiiqo ka cafe, sidaas darteed waa layaabna ma leh waa ku Beer Route by tareenka – Qamri ugu fiican Yurub.
Dhismaha ayaa haatan leedahay Sam Smith Old warshad khamri. Baarar waa go a in dhismayaasha quruxda badan, ales dhaqanka iyo gudaha raaxo. Ma jiraan wax magac weyn, qurbaannada kaliya cajiib ah ka warshad khamri u gaar ah in Tadcaster, Yorkshire.
In kastoo warshad khamri ah ayaa tan iyo casriyeeyey 1993, ka miles of guryihii gabowga hadhay dhulka hoostiisa waa qayb ka mid ah socdaalada. Tog A ka baxsan awooddooda dhamaadaa ah ferments alwaax furan iyo laba qof oo ka mid ah foosto alwaax weyn oo nooca la isticmaalaa si loo sii gabowdid dhan Pilsner Urquell.
waxaan aad ha karaa on qarsoodi ah a? biir ugu fiican Germany waa ma in Munich. Germany ayaa kala duwan weyn ee qamri gaar ah. Xitaa badan oo dalka ka tacaamulo maalin la yaab leh u fiican yihiin. Laakiin ma biir kasta waxay noqon kartaa mid aad u fiican, xitaa dalka biir waa halyeey. Haddii aad raadinayso kala duwan oo aad jeceshahay in aad biir, akhlaaqdiisa iyo sizzle, naftaada raalli sameeyo iyo qorsheeyaan safar si ay dalka dib ugu Bavarian, halkaas oo biir ah waa qayb ka mid ah dhaqanka maxalliga ah oo waxaa brewed by dadka dhabta ah la sheekooyinka inaad u sheegto.
Toddobaatan mid yar- iyo khamriga size bartamihii shaqeeyaan qayb ka this ee Bavaria. Qaar ka mid ah dib taariikhda in 1400s ah. Kow iyo toban iyaga ka mid ah mid ahaayeen dhismi kaniisadda, maamula Biyac ama ay leedahay abtirsan. Saddex ayaa weli ku shaqeeya by lid ku Jarmal iyo mid warshad khamri ugu da'da weyn Abbey oo adduunka ah. Hoose Bavaria waa maal qarsoon marka ay timaado biir.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-beers-route-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in ay es fr ama / / iyo luuqado badan.